Apokalypsy 22 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
Reniranon’ny ranon’aina (1-5)
‘Avia! Misotroa maimaim-poana amin’ny ranon’aina’ (17)
“Avia, Jesosy Tompo ô!” (20)
22 Ary nampiseho ahy ny reniranon’ny ranon’aina+ izy. Madio mangalahala hoatran’ny vato kristaly izy io, sady nikoriana avy teo amin’ny seza fiandrianan’Andriamanitra sy ny Zanak’ondry,+ 2 teo afovoan’ny lalamben’ilay tanàna. Nisy hazon’aina teo amin’ny andaniny roa amin’ilay renirano, ary namoa in-12 izy ireo, izany hoe namoa isam-bolana. Ary natao hanasitranana ny firenena ny ravin’ireo hazo ireo.+ 3 Ary tsy hisy ozona intsony. Fa ho ao amin’ilay tanàna kosa ny seza fiandrianan’Andriamanitra sy ny an’ny Zanak’ondry.+ Ary hanao fanompoana masina ho an’Andriamanitra ny mpanompony, 4 ka hahita ny tarehiny.+ Hosoratana eo amin’ny handrin’izy ireo koa ny anaran’Andriamanitra.+ 5 Tsy hisy alina intsony+ koa, ka tsy hila ny hazavan’ny jiro na ny hazavan’ny masoandro izy ireo, satria hanazava azy i Jehovah* Andriamanitra.+ Ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy ireo.+ 6 Hoy izy tamiko: “Azo antoka* sady marina+ ireo teny ireo. Ary naniraka ny anjeliny i Jehovah,* ilay Andriamanitra miteny amin’ny alalan’ny mpaminany,+ mba hampiseho amin’ny mpanompony ny zavatra hitranga tsy ho ela. 7 Ho avy haingana aho.+ Sambatra izay manaraka ny tenin’ny faminaniana ato amin’ity horonam-boky ity.”+ 8 Izaho Jaona no naheno sy nahita an’ireo zavatra ireo. Rehefa naheno sy nahita aho, dia niankohoka hivavaka teo an-tongotr’ilay anjely nampiseho an’ireo tamiko. 9 Hoy anefa izy tamiko: “Tandremo! Aza manao an’izao! Fa mpanompo ihany aho, hoatr’anao sy ny mpaminany rahalahinao, ary hoatran’ireo manaraka ny teny ato amin’ity horonam-boky ity. Andriamanitra no ivavaho.”+ 10 Hoy koa izy tamiko: “Aza asiana tombo-kase ny tenin’ny faminaniana ato amin’ity horonam-boky ity, fa efa akaiky ny fotoana voatondro. 11 Izay manao ny tsy marina, dia aoka mbola hanao ny tsy marina ihany. Izay maloto, aoka mbola haloto ihany. Izay olo-marina kosa, aoka hanao ny marina ihany, ary izay masina, aoka mbola ho masina ihany. 12 “‘Ho avy haingana aho, ary efa vonona aho hamaly ny tsirairay arakaraka izay ataony.+ 13 Izaho no Alfa sy Omega,*+ ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. 14 Sambatra izay manasa ny akanjony,+ mba ho afaka hankeo amin’ny hazon’aina+ sy ho afaka hiditra ao amin’ilay tanàna, avy eo amin’ny vavahadiny.+ 15 Any ivelany kosa ny alika,* ny mpilalao ody, ny mpijangajanga,* ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay tia lainga sy mpandainga.’+ 16 “‘Izaho Jesosy dia naniraka ny anjeliko hitory momba an’izany aminareo mba hahasoa ny fiangonana. Izaho no faka sy taranak’i Davida,+ ary izaho koa ilay kintan’ny maraina mamirapiratra.’”+ 17 Miteny tsy an-kijanona ny fanahy sy ny ampakarina+ hoe: “Avia!” Ary izay maheno, aoka hilaza hoe: “Avia!” Dia aoka ho avy izay mangetaheta.+ Ary izay maniry, aoka hisotro maimaim-poana amin’ny ranon’aina.+ 18 “Izao no lazaiko amin’izay rehetra maheno ny tenin’ny faminaniana ato amin’ity horonam-boky ity: Raha misy manampy zavatra amin’ireo,+ dia hampian’Andriamanitra ny loza hanjo azy, izany hoe ny loza voasoratra ato amin’ity horonam-boky ity.+ 19 Ary raha misy manala teny ato amin’ity horonam-bokin’ny faminaniana ity, dia hesorin’Andriamanitra ny anjarany amin’ny hazon’aina+ sy ny tanàna masina,+ izany hoe izay voasoratra ato amin’ity horonam-boky ity. 20 “Hoy ilay mijoro ho vavolombelon’ireo zavatra ireo: ‘Eny, ho avy haingana aho.’”+ “Amena! Avia, Jesosy Tompo ô!” 21 Enga anie ny olona masina hanehoan’i Jesosy Tompo hatsaram-panahy miavaka!
^ Na: “Azo atokisana.”
^ Na: “no A sy Z.” Litera voalohany sy farany amin’ny abidy grika ny Alfa sy Omega.
^ Izany hoe ny olona izay maharikoriko an’Andriamanitra ny fanaony.